Mabhuku mashanu ezvechikadzi zvakaburitswa mugore rapfuura | Bezzia
Maria vazquez | 08/04/2021 12:00 | Nhau
Mwedzi wega wega tinounganidza muBezzia dzimwe nhau dzekunyora kuitira kuti imi mose muwane iyo inoita kuti munakidzwe nekunakidzwa nekuverenga. Nekuti kune vedu vedu vanogara vaine bhuku muruoko, kuverenga kunofadza, kunyangwe kana kuverenga kusinganakidze. Nekuti kunyangwe isina kugadzikana pane mabasa anodikanwa uye manzwi anonakidza kunzwa. Uye hatina kukahadzika kuti aya mabhuku mashanu ezvechikadzi achange ari eboka iro.
1 Chechikadzi. Pfupiso sumo yezvematongerwo enyika
2 Hupenyu hwechikadzi
3 Vanhukadzi vechiIslam
4 Kurwisa vakadzi vanosangana
5 Tarisa semukadzi
Chechikadzi. Pfupiso sumo yezvematongerwo enyika
Vanyori: Jane Mansbridge naSusan M. Okin
Muparidzi: Indómita Peji
Mune ino vhoriyamu, vaviri vevakakurumbira vechikadzi nezvevadzidzi vanopfupikisa mabasa ayo maviri akaburitsa nezvenyaya uye ongorora mipiro yevakasiyana vakadzi vanofunga uye mafashama. Inotungamirwa nehuremu uye kukosha kwekusarerekera izvo zvinodikanwa kwazvo nhasi mundima iyi uye mune vamwe vazhinji, vanyori vacho vanotiratidza iwo mapoinzi akaenzana uye mitsara inopatsanura yevakadzi vakasiyana uye vanojekesa pfungwa yezvematongerwo enyika yatora basa rakakura. munzvimbo yeruzhinji.
Munyori: Ana Requena
Makore mashoma apfuura anga ari iwo ekuputsa runyararo: kutenderera pasirese zviuru zvevakadzi vakagovana zviitiko zvavo zvechisimba nekushungurudzwa pabonde. Asi iko kutaura, kwakakodzera, kunofanirwa kuperekedzwa nemumwe: iko kwekunakidzwa kwevakadzi. Tatarisana nekutyisidzira pabonde, hukadzi hunoisa chishuwo patafura, kuzvitonga pabonde, kodzero yevakadzi yekuva nyaya dzebonde nekunakirwa kwete kwete zvinhu chete. Iyo nzira haisi nyore: bonde yave iri imwe yezvombo zvehurume kutakura vakadzi.
Nechikonzero ichi, ikozvino kupfuura nakare kose, tinofanirwa kusimbisa nyaya yechikadzi iyo inotibvumidza kurwisa zvisaririra izvo zvichitiremedza, kuvaka zvakare chishuwo uye nenzira yatinoenderana nayo, nekukunda kodzero yemafaro. Pamwe ndosaka chidhori chepabonde chakaita seSatiferi chiri kukonzera kunzwa uye kubatsira vakadzi kuputsa taboo pakuita bonhora. Asi isu tinofanirwa zvakare kutaura nezve rimwe divi: pane dzakawanda nguva apo vakadzi vanoshandisa kodzero yavo yekuda vanosangana nehukasha hwevanhurume. Kuputira, kuzvidza, kumirira zvisina kukodzera, kutsiva, kusagutsikana kana bonde pasina iota yekuchengeta ndomumwe maitiro atinowana. Chii zvachinja ipapo, uye chii chatingaite?
Vanyori: Asma Lamrabet, Sirin Adlbi Sibai, Sara Salem, Zahra Ali, Mayra Soledad Valcárcel naVanessa Alejandra Rivera de la Fuente
Islamic feminism ndeye kumutsiridzwa musangano, mumweya uye zvematongerwo enyika, iyo inozvarwa kubva pakudzokera kune zvinyorwa zveIslam, mukuvakwa kwenzanga dzemazuva ano dzakawanda. Kusiyana nezvakaitwa neWest nemasimba ayo, mune yayo huru, yechikoloni uye impiriistia mania yanga ichida kuratidza, Islam inoziva kuenzana kwevakadzi. Islamic feminism yakavakirwa padudziro yeKorani, ichiratidza magariro uye zvematongerwo enyika nezvekusarura vakadzi, zvichibva padudziro yemadzitateguru ebhuku dzvene reIslam.
Mupfungwa iyi, ibato rinosimbisa iro basa revakadzi, rakavakirwa pachimiro chekuenzana nekuremekedza varume, varipo mutsika yavo yechokwadi yechitendero. Nharo yavo ndeyekuti Islam yakadudzirwa pamusoro pemazana emakore nenzira yemadzitateguru uye misogynistic, nekudaro ichikanganisa meseji yayo yemweya. Uku kubata kunotsvaga kudzamisa misiyano, pamusoro pekuchengetedza mukadzi kunze kwe kuenzana kutora chikamu munzvimbo dzese dzevanhu vechiMuslim.
Kurwisa vakadzi vanosangana
Munyori: Catalina Ruiz-Navarro
Mubhuku rino, Catalina Ruiz-Navarro, rimwe remanzwi ane mukurumbira wesangano iri muLatin America, inofamba, kubva kuuchapupu hwakavimbika uye hwakaomarara, nzira inotarisana nemuviri, simba, mhirizhonga, bonde, kurwira muratidziri uye rudo. Nekudaro, magamba gumi nerimwe, anosanganisira María Cano, Flora Tristán, Hermila Galindo naVioleta Parra, inoratidzwa zvakanaka naLuisa Castellanos, vanokwidza manzwi avo uye vanoratidza kuti kutaura nezvevakadzi kunokosha, kwakakosha, kurwisa.
Iri bhuku reLatin American pop feminism kuverenga kunofamba, kunetsa, kunovhunza; iri gwara rekusimbisa kune chero munhu anoda kutaura nezve zvazvinoreva kuva mukadzi munyika.
Munyori: Nivedita menon
Incisive, eclectic, uye zvematongerwo enyika, Kuona seMukadzi ibhuku rakashinga uye rakakura. Kumunyori Nivedita Menon, feminism haisi yekukunda kwekupedzisira pamusoro pehutungamiri hwemhuri, asi nezve a zvishoma nezvishoma shanduko yenzvimbo yemagariro sarudzo yezvivakwa zvekare uye mazano ekuchinja zvachose.
Iri bhuku rinosimbisa pasi rese kuburikidza nevakadzi femsi, pakati pekongiri chiitiko chekutonga pamusoro pevakadzi muIndia nematambudziko makuru ehukadzi hwepasi rose. Kubva kupomero dzekushungurudzwa pabonde nevanhu vane mukurumbira pasi rose kusvika padenho inoitwa nevakadzi vezvematongerwo enyika, kubva pakurambidzwa kwechidzitiro muFrance kusvika pakuedza kumanikidza vatambi sehembe dzinosungirwa mumakwikwi epasi rese ebadminton, kubva kumatongerwo enyika kusvika vashandi vepamba vashandi kumusangano wePink Chaddi, Menon Iyo inoratidza nehunyanzvi nzira idzo feminism inonyatso kuomesa nekushandura nharaunda dzese dzenzanga yazvino.
Wakamboverenga here imwe yadzo? Ndakafarira zvechikadzi zvechiIslam mwedzi yapfuura uye ndine rimwe remabhuku echikadzi pachinyorwa ichi mumaoko angu. Nekuti zvinogara zvichinakidza kusangana nemanzwi kubva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi uye kubva mutsika dzakasiyana zvakanyanya nedzedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Mabhuku mashanu ezvechikadzi zvakaburitswa mugore rapfuura